Tag: gotomeeting | Martech Zone
Sonix: Transcription automatique, fandikan-teny ary dikanteny amin'ny fiteny 40+
Alarobia 6 Janoary 2021 Alarobia 6 Janoary 2021 Douglas Karr
Volana roa lasa izay, nizara aho fa nampihatra ny fandikan-tenin'ny milina ny atiny ary nipoaka ny fahatongavana sy ny fitomboan'ny tranonkala. Amin'ny maha-mpitory ahy, ny fitomboan'ny mpihaino ahy dia zava-dehibe amin'ny fahasalaman'ny tranokalako sy ny orinasako, noho izany dia mitady fomba vaovao foana aho hahatratrarana mpihaino vaovao… ary iray amin'izany ny fandikan-teny. Taloha, nampiasa ny Sonix aho mba hanomezana fandikana ny podcast-ko… fa izy ireo kosa
Alakamisy, Desambra 14, 2017 Alarobia, Oktobra 28, 2020 Douglas Karr
Ny motera fanadihadiana an'i Gong dia mamakafaka ireo antso amidy amin'ny sehatra tsirairay sy agregate mba hanampiana anao hahafantatra izay mandeha (sy izay tsy). Manomboka amin'ny fampidirana kalandrie tsotra i Gong izay manamarina ny tetiandrom-pivarotana repoblikana tsirairay mitady fivoriana fivarotana, antso, na demô ho avy hanoratana. Manatevin-daharana ny antso varotra voalahatra ho mpanatrika fivoriana virtoaly i Gong avy eo hanoratra ny fotoana. Ny feo sy ny horonan-tsary (toy ny fizarana amin'ny efijery, fampisehoana ary ny fampisehoana) dia voarakitra
Converge: Cloud CRM mitambatra ho an'ny SMB
Zoma, Septambra 6, 2013 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Ny rafi-pitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa dia iray amin'ireo zava-dratsy ilaina… raha tsy mandroso tsara izy ireo. Raha rafitra sarotra izany dia mitaky ny fanelingelenana ny mpiasa ny orinasa, mitaky fotoana sy hery be loatra izany, ary tsy manome anao torohevitra azo ampiharina. Mipoitra izao ny rafitra CRM vaovao izay mampifanaraka akaiky azy ireo amin'ireo fizotran-draharaha anatiny izay raisin'ireo ekipa mpivarotra sy marketing. Converge dia mamaritra ny tenany ho CRM rahona mahery nefa tsotra ho an'ny kely
Zapier: Fiasa mandeha ho azy ho an'ny orinasa
Alakamisy 7 martsa 2013 Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Douglas Karr
Tsy tsapako mihitsy hoe tsy maintsy miandry 6 taona aho alohan'ny hanombohantsika mahita ireo rindranasa izay mahita an-tsaina an-tsaina ireo interface amin'ny programa… fa tonga eo ihany izahay. Yahoo! Nalefa tamin'ny 2007 ny paipa ary nanana mpampitohy sasany amin'ny fanodikodinana sy fampifandraisana ny rafitra, saingy tsy nisy fampidirana am-poana ny serivisy amin'ny Internet sy ny API izay nipoaka nanerana ny tranonkala. Zapier dia mombamomba azy… ahafahanao mandeha ho azy eo anelanelan'ny serivisy an-tserasera - ankehitriny 181! Zapier dia an'ny
Alarobia 22, 2012 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Mampiasa GotoMeeting izahay isan'andro isaky ny miasa mba hiresahana amin'ireo mpanjifantsika. Tena tsara tokoa raha mahita ny iray amin'ireo mpanjifanay sy mpanohana anay, Mindjet, milalao horonantsary GotoMeeting! Miresaka ny fampifanarahana ilay video. Na mamolavola sarintany saina ianao na mijery drafitry ny tetikasa… ny fahitana no tena ilaina. Ny sarintanin'ny saina dia maka sary an-tsaina ny hevitra, ny fizotrany ary ny fifandraisana mba hahamora azy ireo. Gotomeeting, mazava ho azy, dia manao toy izany koa amin'ny fahaizana ankehitriny